Ingiriiska Oo Cabasho Ka Muujiyey LIX Garsoore Oo Jarmal Ah Oo Qabanaya Kulanka England vs Ukraine - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaIngiriiska Oo Cabasho Ka Muujiyey LIX Garsoore Oo Jarmal Ah Oo Qabanaya Kulanka England vs Ukraine
Ingiriiska Oo Cabasho Ka Muujiyey LIX Garsoore Oo Jarmal Ah Oo Qabanaya Kulanka England vs Ukraine
Kaddib markii uu Ingiriisku garaacay Jarmalka ee uu ka reebay tartanka Euro, waxa soo food-saaray walaac weyn xilli ay isku diyaarinayaan ciyaarta Ukraine ee Sabtida, waxaanay u cadhaysan yihiin xidhiidhka kubadda cagta Yurub.
Ingiriiska yaaa u arka in kulanka Ukraine ayay ku jiraan af libaax oo ay la ciyaarayaan 11ka laacib ee xulka dalka ay waajahayaan iyo toddoba qof oo kale oo ah garsooreyaasha kulanka.
Taageereyaasha xulka England ayay ku adag tahay inay rumaystaan in Jarmalka oo ay ka dhaxayso cadaawad ciyaareed, isla markaana ay kulankii hore ka reebeen tartanka ay noqdaan garsooreyaasha ciyaartooda Ukraine ee Sabtida.
Garsooraha dhexe, labada kaaliye ee calanka haya ee dhinacyada garoonka taagan, garsoorka afraad ee jooga beddelka iyo dhamaan garsooreyaasha VAR ee ciyaartan loo doortay ayaa waxay kasoo jeedaan waddanka Jarmalka, waxaanay taasi walwal ku haysaa Ingiriiska.
Garsooraha VAR iyo saddexdiisa gacan-yare ayaa iyaguna Jarmal ah, mana jiro qof kale oo tarraxa oo garsoorka kula qoran kulankan.
Taageereyaasha xulka qaranka Ingiriiska ayaa baraha bulshada kaga falceliyey go’aanka UEFA garsooreyaasha Jarmalka ee kalidood ah ay ugu dhiibtay kulankan, waxaanay ku tilmaameen dagaal iyo inay suurtogal tahay in dalkooda lagaga aargoosto siidhiga oo uu garsooruhu u xagliyo dhinaca Ukraine.